Now, We are using Unicode — MYSTERY ZILLION
Unicode ကို အခုမှ စပြီး ပြောင်းလဲ လိုက်ပါပြီ။ Unicode နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းခြင်းများကို ဒီမှာ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ Unicode အသုံးပြုပုံကို <a href="http://blog.mysteryzillion.org/basic/unicode-guide/">ဒီမှာ</a> ဖော်ပြထားပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ iPhone , iPodTouch တို့မှာလည်း ကြည့်ရှုလို့ ရပါပြီ။ font မရှိပဲနဲ့လည်း iPhone, iPodTouch တို့မှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်။<div><br></div><div><img src="http://www.saturngod.net/wp-content/uploads/IMG_0485.png"></div>;
မိုက်သွားပြီ....အခု Layout ကပိုမိုက်သလိုပဲ။။။
Woo! I Love This. :X
Multi touch isn't working. Can't zoom in/out.
Cool!<br>Now I fell like hanging around in MZ again, because of this new UI and <br>Making accessible from mobile <br>
Email နဲ့ ဝင်လို့ရအောင်လုပ်ထားတာ အဆ်ပြေသွားတယ် မဟုတ်ရင် ဗမာနာမည်တွေ အကုန်လုံးခက်ကုန်မယ်။<br>
ကောင်းပါတယ်။ ကောင်းခြင်း (၅)ပါး နဲ့ကို ပြည့်စုံပါတယ်။ <br>
computer humor ထဲဝင်လိုမရဘူး ဖြစ်နေတယ်။<br>
i'm proud of MZ...<br>
good ... nice nice brother saturn <br>
Nyan Linn Myat . Fixed.<br>
အစမ်းရိုက်ကြည့်တာပါ။ ကျွန်တော်က Myanmar3ကိုယခင်ကတည်းက ရုံးသုံးအနေနဲ့ သုံးနေရလို့ လက်ကွက်အနေနဲ့တော့ ရင်းနှီးပြီးသားပါ။ Keyboard ကိုအရင်သုံးလက်စ Keyman နဲ့ပဲရိုက်ကြည့်ထားပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေပါကြောင်းပါခင်ဗျား။<br>
bro, <br>my iphone is jailbroken, zawgyi font has been installed.<br>there is no other myanmar font in my phone.<br>you said that even if there is no myanmar font, we can see it.<br>i tried it, but i can't read the font.<br>pls help me out.thanks<br>
@milo , iOS version should be at least 4.2 or later
အခုမှပဲ ဝင်လို့ရတော့တယ်။ <br>
@MrDBA , sorry about that ​<span class="Emoticon Emoticon4"><span>:D</span></span> login allow permission ပေးဖို့ မေ့သွားလို့။
ဖြစ်ရလေဗျာ ... <br><br>
Ko DB ကိုစေတန် Banned ထားတာလား
<span class="Emoticon Emoticon10"><span></span></span> :-D
@ClamHill , ကိုဒီဘီကို မဘန်းထားဘူးဗျ ။ Admin Account တွေကို Login ဝင်ဖို့ permission Default က ပိတ်ထားတယ်။ Login ဝင်ရင် ဝင်ခွင့်မပြုပါဆိုပြီး ပြနေတာပေါ့။ အခုမှ Admin Account တွေကို Login ဝင်ခွင့်ဖွင့်ပေးလိုက်တာ။ :-))
Admin, Mod တွေကို အရောင်ပြန်ပြောင်းပါဦး မဟုတ်ရင် ကျွန်တော်က တွေ့ရာလူသတိပေးချက် ထုတ်နေတာ တော်ကြာနေ ဘာမှန်းမသိရင် အဆဲခံရနိုင်တယ် <br>
အင်း အခုက ဘယ်သူတွေ အွန်လိုင်းဖြစ်နေတယ် မမြင်ရဘူးဗျ အဲဒီတော့ ကိုယ်ဖြေစေချင်တဲ့လူ အွန်လိုင်းဖြစ်နေသလား မဖြစ်သလားလည်း ကြည့်လို့မရဘူး ဒါပေမယ့်ပေါ့လေ အက်ဒမင်တွေ မော်ဒရေတာတွေ ပြေးနေလည်းမသိတော့ဘူးပေါ့ :P<br>
Vanilla ရဲ့ UI ကတော့အလန်းပဲ .. ရုတ်တရက်ပြောင်းသွားတော့အရင် vbulletin ကိုလွမ်းသလိုလိုတော့ရှိသား ...
ကိုစေတန်, profile setting မှာ <span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Masterpiece Uni Sans', Yunghkio, Myanmar3; line-height: 22px; "><a href="http://www.mysteryzillion.org/profile/removepicture/11365/dragonvirus/BNUN2K7EXSOL"; style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(102, 102, 102); "><b>ကွန်ုပ်ပုံကို ဖြုတ်လိုက်ပါ</b></a> ဖြစ်နေတယ် ျ ကျန်ခဲ့တယ်ထင်တယ် ... </span><div><font class="Apple-style-span" face="'Masterpiece Uni Sans', Yunghkio, Myanmar3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 22px;"><br></span></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="'Masterpiece Uni Sans', Yunghkio, Myanmar3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 22px;"><img src="http://s3.amazonaws.com/diigo/thumbnail_550/2102274_69545634_3149198.jpg?AWSAccessKeyId=0R7FMW7AXRVCYMAPTPR2&amp;Expires=1302973086&amp;Signature=8Pj8NVaAQLBamJtmbj54zH6CMuw=&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;
@DragonVirus Fixed. Vanilla Default က ဒီလောက် ကြည့်မကောင်းဘူး ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် Theme ပြန်ရေးထားတာပါ။
stackoverflow လိုအောက်ကနေ ကပ်ပြီးကော့မန့်ပေးလို့ရဖူးလားဗျို့ အခုကြတော့ vote up လုပ်လိုက်ရင်ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့အဆက်အစပ်မရှိတော့ဖူး <br>နောက် vanilla အကြောင်း FAQ ရေးသင့်တယ်ထင်တယ်။ <br>
@Morris , vanilla က forum ပါ။ thread comment ပုံစံ​မျိုးအတွက် plugin ရှိပေမယ့် ကြည့်ရတာ အရမ်းရှုပ်သွားမှာဆိုးလို့ပါ။ သေသေချာချာ စမ်းပြီးမှ ထည့်မယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ်။ Vanilla အကြောင်းကို FAQ ကိုတော့ ကြိုးစားပြီး ရေးပေးပါ့မယ်။ အချိန်တော့ ပေးရလိမ့်မယ်။ အခုတလော project တွေကော ရုံးအလုပ်တွေကော အရမ်းများနေလို့ ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်။
Good Bro<br>သေသေချာချာတောင် မစမ်းကြည့်ရသေးဘူး။ အခုမှပဲ ကိုလူပျိုကြီးကနေ CalmHill ပြောင်းသွားလဲဆိုတာ သိတော့တယ်. :mm<br>
CalmHill ဆိုတာ ကိုလူပျိုကြီးလား .. K ပြောမှပဲသိတော့တယ် .. April Fool တုန်းက ကို Alexander တင်လိုက်တာကို ရင်နာ သွားတယ်နဲ့တူပါတယ် .. =P<br>
ဟယ်. . မသိဘူးလား??? Forum မှာ မျက်မှန်လေး ပင့်ပင့်ပြီးစကားပြောတာ သူရယ် ကိုစေတန်ရယ် Morris ရယ် သုံးယောက်ပဲရှိတယ်။<br><br>﻿<i meant in Avatar>. <br>
ကိုလူပျိုကြီး Avatar ပုံနဲ့ ကိုလူပျိုကြီးလို လေသံတစ်ခါတစ်ခါထွက်တဲ့သူတစ်ယောက်တော့ တွေ့တယ်... MZ မှာတော့မဟုတ်ဘူး။ တခြား Forum တစ်ခုမှာ .. <br><br>He is <a href="http://vakok.net/forum/index.php?action=profile;u=553">nazgaul</a>; , Is that U? <br> ;;)
Wow!မိုက်တယ်ဗျာ။ unicode ကိုသုံးကြည့်ချင်နေတာ။ Yunghkio unicode ကလှတော့သုံးချင်နေတာ။ ခုသုံးရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ forumကိုလည်းဝင်ရတာအရင်ကထက်ပိုမြန်သွားတယ်။<br>
<div>@Morris , အခု quote ကို ထည့်လိုက်တော့ နည်းနည်း ရှင်းသွားမယ်ထင်တယ်။ nested thread တွေနဲ့ဆိုရင် ရတော့ရမယ်။ design ကို ပြန်ပြင်ရလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး နည်းနည်း နှေးသွားနိုင်တယ်။ သေသေချာချာ စမ်းကြည့်ရအုံးမယ်။ အခုတော့ အဆင်ပြေအောင် quote ထည့်ထားပေးတယ်။</div>
mz က တော်တော် ပြောင်းသွားတယ်။ အရင်က နဲ့ တခြားဆီကို ဖြစ်သွားတယ်။ သုံးရတာ နဲနဲ ခက်သွားသလိုပဲ။ နောက် unicode ဆိုတော့ ခက်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော် ကတော့ online converter နဲ့ ပြောင်းနေရတယ်။ MZ မှာ online converter ထည့်ပေးရင် ပိုအဆင်ပြေ မယ်ထင်တယ်။ <br>
အစ်ကို အဲဒါဆို ကီးမက်ဂျစ်သုံးလိုက်လေ ပိုအဆင်ပြေမယ်။ ကီးဘုတ်က ဇော်ဂျီလက်ကွက်အတိုင်းပဲ။ စာရိုက်ရတာ ပိုတောင်လွယ်သွားသေးတယ်။ ကီးဘုတ် zawgyi ကို install လုပ်ထားရင်တော့ ကီးမက်ဂျစ်ကို shortcut ကိုတော့ နည်းနည်းပြန်ပြောင်းပေးရမယ်။ zawgyi က shirft+ctrl ဆိုတော့ ကီးမက်ဂျစ်ကို ctrl+shirft +x ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပေါ့ ဥပမာအနေနဲ့ပြောတာပါ။ အဆင်ပြေသလိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ <br>
သုံးရတာနဲနဲခက်တယ်နော..... ကျင့်သားရသွားမယ်ထင်ပါရဲ့ နောက်တော့... သုံးရတာပိုမြန်လာသလိုခံစားရတယ်... ကောင်းပါတယ် အားလုံးကြိုက်တယ်.... စာရိုက်တာနဲနဲပိုကြာသွားတယ်... <br>
ယွန်းချို Fonts ကအစ အကုန်ကောင်းတယ်.. ဒါပေမယ့် စာဖတ်ရတာ .. အရင် vBulletin လောက်မရှင်းဘူးလို့ ခံစားနေရသလိုပဲ ...<br>အမှန်ပြောရရင် Myanmar User တွေအနေနဲ့ Vanilla နဲ့အံ၀င်ခွင်ကျဖြစ်ဖို့ အချိန်အတို်းအတာတစ်ခုအထိတော့ စောင့်ရအုံးမှာပေါ့...<br><br>ဒါပေမယ့်လည်း MZ အောင်မြင်အုံးမှာပါ ... <br> L-)
<br>ယူနီကုတ်ကိုကြောက်လို့ ရှောင်နေတာ အခုတော့ရှောင်လို့မရတော့ဘူး
<span class="Emoticon Emoticon4"><span>:D</span></span>
<br><br>keymagic ကို http://code.google.com/p/keymagic/downloads/list ကနေ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် <br><br>http://blog.mysteryzillion.org/basic/unicode-guide/<br><br>မှာ လည်း ရနိုင်ပါတယ်။<br>
ယူနီကုတ်က keymagic နဲ့သုံးရင် ဇော်ဂျီလက်ကွက်အတိုင်းရိုက်လို့ရပါတယ်ဗျ .... ပိုတောင်ကောင်းသွားသေးတယ်.. ကျွန်တော်လည်း စသုံးခါစကတော့ ဗရုတ်သုတ်ခနဲ့ပေါ့ဗျာ ... ခုတော့လည်း ယူနီကုတ်မှ ယူနီကုတ်ဖြစ်သွားပြီ .... <br><br>နောင်တော်တို့လည်း ယူနီကုတ်ကိုပြောင်းလဲသုံးကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်ဗျာ ... <br><br>
Role Title တွေကို comment တွေမှာ မြင်အောင် လုပ်ထားပေးတယ်။ post count ဘေးမှာ moderator, admin ,registered user ဆိုပြီး မြင်ရလိမ့်မယ်။<br>
ကျွန်တော်က ကွန်ပြူတာနဲ့ပတ်သတ်ရင် လူပြိန်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် သိပ်နားမလည်ပါဘူး။ ပညာရှင်တွေအတွက် သိပြီးသားတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့လူပြိန်းတွေအတွက် နားမလည်သေးတာတွေမေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့မေးခွန်းတွေက အခြားသူတွေသိပြီးသားဖြစ်နေရင် Topic တစ်ခု မျက်စိနောက်စရာဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ ဒီမှာပဲ မေးလိုက်ပါတယ်။
<br> <span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">Zawgyi ကနေ Myanmar3ကိုပြောင်းသုံးတဲ့အခါ ဘယ် Keyboard Layout က စနစ်အကျဆုံး၊ အကောင်းဆုံးနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။</span>
<br> Zawgyi သမားတွေအတွက် ရုတ်တရက် အသုံးပြုရအဆင်ပြေအောင် KeyMagic နဲ့ဇော်ဂျီလက်ကွက် Keyboard Layout အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် နည်းနည်းတော့ အူကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ဥပမာ ဇော်ဂျီမှာ ရယစ်ကို ပုံစံမျိုးစုံအတွက် ကီးမျိုးစုံရှာဖွေနှိပ်ရပါတယ်။ ခု Myanamr3မှာကျတော့ " J " တစ်ခုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ အဆင်ပြေနေပေမယ့် ပိုအားစိုက်ရမယ့် တခြားဟာတွေ (ဥပမာ Shitf+M Shift+N) လိုမျိုးတွေ အကျင့်ပါပြီး ပင်ပင်ပန်းပန်းလိုက်ရိုက်ရတာ နည်းနည်းတော့ အူကြောင်ကြောင်နိုင်ပါတယ်။ စသုံးကာစမှာ အလွယ်လမ်းလိုက်မိလို့ ဒီလိုကြီး အမြဲတမ်းသုံးနေရမယ်ဆိုလည်း မနိပ်လှဘူးလို့ထင်ရပါတယ်။
<br> ပြီးတော့ ဘယ်လောက်ပဲ Zawgyi နဲ့တူအောင်ဖန်တီးထားပေမယ့် ဟာကွက်တွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ လိမ်မော်သီးဆိုတဲ့စာလုံးရိုက်ဖို့ Zawgyi မှာလို " မ " နှစ်လုံးမဆင့်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် KeyMagic နဲ့ မှေးရိုက်မယ့်အစား စနစ်ကျတဲ့ KB Layout တစ်ခုခုနဲ့ လေ့ကျင့်ထားရင် ပိုသင့်တော်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုသာဆိုရင် ဘယ် KB Layout က သင့်တော်ပါသလဲ။ ဒါမှမဟုတ် Myanmar3အတွက် Standardized KB Layout ရှိရင် ပြောပြပေးပါ။
<br> ဒီနေရာမှာ ပြောစရာရှိလာတာက ကျွန်တော် အစက သုံးခဲ့တဲ့ အက္ခရာ ကီးဘုတ်ပါ။ သူက Myanmar3အတွက် သုံးရတာ ပိုစနစ်ကျတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ (အခြား KB Layout တွေကျွန်တော်မသုံးဖူးလို့မသိတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုကိုပဲ ယူနီကုဒ်ဖိုရမ်တွေမှာ အကြိုက်တွေ့ကြတာများလို့သုံးကြည့်တာပါ။) ဒါပေမယ့် Zawgyi နဲ့တွဲသုံးတဲ့အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်အတွက်ပြဿနာနည်းနည်းရှိလာပါတယ်။ KB Layout ၂ခုရယ်၊ English အတွက်ရယ်ဆိုတော့ Language Bar မှာ ၃ မျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ အခြားသူတွေတော့မသိဘူး။ ကျွန်တော်တော့ အဲဒီသုံးမျိုးပတ်သုံးရာမှာလွဲနေပါတယ်။ လွဲပုံကဒီလိုပါ။ Ctrl + Shift နဲ့ပဲ လှည့်ပတ်ပြောင်းပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ Zawgyi အလှည့်မှာ ဘိုစာလုံးတွေထွက်လာတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျပြန်တော့ Myanmar3အစား ဘိုစာတွေပါလာပြန်တယ်။ သေချာအောင် Languate Bar ကနေ mouse နဲ့သေချာသွားရွေးလည်း အဲလိုဖြစ်နေတုန်းပဲ။ တခြားသူတွေအဲလိုဖြစ်မဖြစ်တော့ ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ ကျွန်တော့်စက်ပဲချို့ယွင်းလား၊ ကျွန်တော်ပဲ မသုံးတတ်သေးတာလားမသိပေမယ့် ခုထိတော့ အဆင်မချောသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဲဒီပြဿနာမရှိတဲ့ KeyMagic ကိုပဲ ခုပြန်သုံးနေပါတယ်။
<br> နောက်ထပ်ကဂျီကဂျောင်ကျချင်တာကတော့ Myanmar3Font ဟာ Zawgyi လောက်ကြည့်ရအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေသလိုပဲ။ ကျွန်တော့်စက်က Windows Font တွေကို Zawgyi အစား Myanmar3ပြောင်းလိုက်တာ ကြည့်ကောင်းတော့ဘူးဗျ။ နည်းနည်းမှုန်ဝါးဝါးဖြစ်နေသလိုပဲ။ MZ မှာမြင်နေရတဲ့ Font လို လှဘူးဗျ။ Font ပုံစံကွဲတွေရှိသေးသလားဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါ။
<br>P.S.: စက်ထဲရှိတဲ့ မြန်မာသီချင်းတွေအကုန် ဇော်ဂျီနဲ့ နာမည်ရိုက်ထားတာ တော်တော်များတယ်။ ခုတော့ တိုင်ပတ်တော့တာပဲ။ အဲဒီမှာလိုက်ပြင်ရင်း ၃ ခုမြောက်အယ်လ်ဘမ်က လိမ်မော်သီးရဲ့ ခွေလေ။ အဲဒီမှာဘယ်လိုရိုက်ရမှန်းမသိရာကနေ ဒီမှာလာမေးတာဗျ။ ခွေ ၃၀ ကျော်ပြင်ဖို့ကျန်သေးတယ်။ တစ်ပုဒ်ချင်းစီပြင်ရဉီးမှာဆိုတော့ ပြင်သေးဘူး။ (ဟော တွေ့ပြန်ပြီ... ဦးက ရိုက်လို့မရပြန်ဘူး) MZ ကဘော်ဘော်တို့ Recommand လုပ်တဲ့ KB Layout နဲ့မှ အေးဆေးထိုင်ပြင်မယ်။ ဒါမှတစ်ခါတည်းကျင့်သားရသွားအောင်လို့။
<br>အဲ... နောက်ထပ် မေးစရာတစ်ခုရှိသေးသဗျ။ Windows Font အကြောင်းဗျ။ ကျွန်တော့် Windows XP မှာ Myanmar3ပြောင်းထည့်လိုက်ပြီ။ အဲဒါ Font က ၂ မျိုးဖြစ်နေတယ်။ ဥပမာ... Start Menu ခေါ်လိုက်ရင် My Computer, Control Panel, Search, Run ဘာညာကွိကွတွေ Myanmar3Font နဲ့ပေါ်ပြီး Program ကျတော့ အရင်မြင်နေကျ Font ကြီးဖြစ်နေတော့ ကြည့်ရတယ်ဆိုးဗျ။ အဲဒါလေးကော ပြောင်းလို့ရလားဗျ။
<br>အင်း... မိုးကြီးတို့များ ဉာဏ်ကလည်း တိမ်သေး... စပ်စပ်ဆော့ဆော့လည်း နိုင်သေး... အမေးအမြန်းလည်းထူသေး... နော့...
ကျွန်တော်ကတော့ NHM ကိုသုံးပါတယ်။ zawgyi layout အတိုင်းပါပဲ။ ကွာသွားတာက Alt +1 နဲ့ Ctrl + shift ပါပဲ။ Alt + 1 ကတော့ အစောပိုင်းသုံးရတာ လက်အကျင့်မရပေမယ့် နောက်ပိုင်း ပုံမှန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ စကားမစပ် MZ က ယွန်းချိုဖောင့်ကိုသုံးထားတာပါ။ <br>
Vanilla ကိုပြောင်းလိုက်တော့ ကြည့်ရတာ နည်းနည်းတော့ အရင်လိုအဆင်မပြေဘူးဗျ။ 'ယွန်းချိုဖောင့်ကိုတော့ ကိုစေတန် ဘလော့ဂ် မှာကတည်းကြိုက်နေတာ။ အခုတော့ သုံးလို့ ရပြီပေါ့<br>
<br><br>You can't see Unicode fonts in Comment box. But, you can check after publish your comment. <br>
အနော်လည်း ယူနီကုဒ်.......MZ ကလူတွေ အားလုံးလည်း ယူနီကုဒ်....အဟိ ;p<br>
<br><br>click <a href="http://www.myanmaritpro.com/profiles/blogs/unicode-auto-convert-script">here</a>; to see detail<br>